Uluhlu lweeNqwelo zabaqhubi kunye nabaqhubi abangekho mthethweni eGoli
USGA, i-R & A igcina uluhlu lweentloko zomqhubi zomthetho
Ngaba wakha waziva iigalufu zithetha "ngabaqhubi abangekho mthethweni" okanye "abaqhubi abangahambisani nabo"? Ziyintoni ezo zonke?
Impendulo emfutshane: Iibhunga ezilawulayo zegalufa-i-USGA kunye ne-R & A-imilinganiselo yamagumbi egalufu kufuneka ahlangane ukuze abe "ngokomthetho" phantsi kweMigaqo yeGalofu . Kodwa ngenxa yokuba umqhubi onikezelweyo akahambelani naloo migangatho ayithethi ukuba umenzi akakwazi ukwenza kwaye athengise. Kusho nje ukuba umqhubi onjalo akahambisani neMithetho yeGalofu kwaye, ngoko, akavumelekanga ukuba asebenzise kuyo nayiphi na imijikelezo yegalufa edlalwa phantsi kwemiqathango (iinqwelo zokujikeleza kunye neemeko zokukhubazeka, umzekelo).
Abanye abakhiqizi - ubuninzi apho mhlawumbi awunakuva - yenza "abaqhubi abangekho mthethweni" kwaye ubathengise kwi-golfing yoluntu. Umzekelo:
Dlulisa amehlo kwi-Amazon Amazon ngokungahambisani okanye 'abangekho mthethweni'
Kodwa abantu abaninzi begalufa abayi kusebenzisa umqhubi onjalo, kwaye kukho ukuhlaselwa ngokungafani nokuphula imithetho ngokudlala enye.
Kuphi ukufumana iiList of Driform Conversing Drivers
Amabhunga olawulo egalofu - i-USGA kunye ne-R & A - igcina uluhlu lweentloko zabaqhubi begalufu ezihambelana neMimiselo yeGalofu. (Ziziphi iigalufu ezininzi ezicinga ukuba njengoluhlu olungabonakaliyo lwabaqhubi beyona nto inenelo uluhlu lwabaqhubi.)
Uludwe lwe-USGA lweeNqwelo zabaqhubi
Usesho lweDrive Driver
I-USGA ivumela abagadi begalufu ukuba balandele uluhlu olupheleleyo, oluhlelwe ngumenzi okanye umkhiqizo; okanye ukuqhuba uphando. Uluhlu lwe-R & A lukhutshwe kwaye lukhangela. Ziqulethe ulwazi olufanayo, luchazwe ngeendlela ezahlukeneyo.
Ukuba awukwazi ukufumana umqhubi wakho kulezi ziluhlu, qha ga mshelana namanye amabhunga olawulo.
Kutheni abaqhubi bebizwa ngokuthi 'Ukulungelelanisa' okanye 'Ukungahambisani'
Ngokutsho kwesiHlomelo II, icandelo 4c leMigaqo yeGalulo, "Ukuyila, izinto kunye / okanye ukwakhiwa, okanye nayiphi na unyango, i-clubhead (ebandakanya ubuso bebhola) akumele: (i) ibe nempembelelo yentwasahlobo esingaphaya komda obekwe kwiProtocol ye-Pendulum Test Protocol kwifayile nge-USGA / R & A, okanye (ii) iquka iinkalo okanye iteknoloji, kubandakanywa, kodwa ingaphelelanga kwimithombo yamanzi okanye impawu zentwasahlobo, ezinomnqweno, okanye umphumo , echaphazela ngokunyanisekileyo umthombo we-clubhead, okanye (iii) mbe mbelelo enkulu ekuqhubeni kwebhola. "
Xa abavelisi bezixhobo zegalufu beyakhela intloko entsha yomqhubi, bayayifaka kwi-USGA kunye ne-R & A yokuvunywa. Iibhunga lolawulo liqhuba iimvavanyo ezahlukahlukeneyo ukujonga ukuyila kunye nemiba yobugcisa kwaye uqinisekise ukuba i-clubhead ihlangabezana neemfuno ezibekwe kwisiHlomelo II. Labo benzayo bayongezwa kwoluhlu lwabaqhubi abahambelanayo.
Abo bangenayo? Kwiimeko ezininzi, i-clubhead ehluleka ukuvavanywa yinto eyenziwa ngumvelisi kude ihlangabezane neemfuno kwiSihlomelo II - de ibekwe kwiluhlu oluhambelanayo. Ngelo xesha, umenzi uya kwimveliso kunye nomqhubi walo omtsha kwaye inkqubo yokwenza nokuthengisa iqala.
Izitolo ezininzi zegalufu zithengisa kuphela abaqhubi abahambayo kuba abaninzi abakhiqizi benza kuphela kwaye bathengisa abaqhubi abahambelanayo.
Kodwa ezinye iikhampani - kwaye, ngokungafanekiyo, uphawu oluthile - ngenjongo yokwenza abaqhubi abangahambisani. Ngoba? Ewe, onke amaphupha aphepheyo okukwazi ukuqhuma ibhomu elide. Abadlali begalufu abangenakhathazeka ngombono wokudlala iqela "elingekho mthethweni" bangathanda ukuthenga umqhubi othembisa ukuxolelwa okungenammiselo kunye nomgama, nokuba ngaba loo mqhubi akahambisani neemfuno kwiMigaqo yeGolf.
Ininzi yegalufa ayiyi kuthi: Asifuni ukubizwa ngokuba ngabaphulaphuli-abakhohlisi, mhlawumbi - ngabaontanga bethu.
Kodwa abanye abagadi begalufu baya kuthenga umqhubi ongahambelaniyo, kuba kunjalo, kutheni? Abadlala kwii-tournaments, abawuthathi mdlalo ngokukrakra, bafuna ukuzonwabisa kwaye badlale umqhubi othembisa ukubancedisa ukuba bawuthathe ixesha elide kwaye baqonde. Kwaye akukho nto ibukeka ngayo nayiphi na indlela ekhangeleka ngayo okanye iinqweno zabo zokudlala.
Izizathu eziqhelekileyo eziqhelekileyo umqhubi akahambisani
Ngoko yintoni eyenza "umqhubi mthethweni" ongahambisani? Zininzi izizathu ezinokwenzeka, kodwa ezimbini ziqhelekileyo.
Xa umqhubi engaziqondi ngokungahambisani naye: Ngezinye iinkhathi, iimpawu ezinkulu zegalufa ziza ku-ekunyuseni ngokusondeleyo kwimida ngangokunokwenzeka - ngokungahambi ngokungahambisani nemida okanye ngokungehlulekiyo ukuhlangabezana neemfuno zezixhobo kwimigaqo. Kule meko, isigwebo sisoloko siqhelekile . I-CT, njengoko igqityiweyo, imilinganiselo yokwakheka kwe-clubface. Umenzi unako ukudlula umda kwi-CT, ukunikezela ngentloko yomqhubi engeyiyo. Ngokuqhelekileyo xa kwenzeka, umenzi uya kwenza i-tweaks kwi-design clubhead kwaye iphinde ingenise iklabhu ukuze ivume.
Xa umqhubi enenjongo engahambelaniyo: Lezo nkampani ezingabonakaliyo okanye iinkampani ze-niche ezenza ngenjongo yokuthengisa nokungahambisani nabaqhubi abakhathazeki ukuzithumela kwi-USGA kunye ne-R & A. Bazakhela ukuba "zingekho mthethweni," emva koko. Njani? Ngokuqhelekileyo, ngokwenza ii-clubheads ezinkulu kuneemvume. Imithetho yeGrade umqhubi we-golf clubhead umthamo ukuya ku-460cc. Ngoko inkampani efuna ukwenza "umqhubi mthethweni" iya kuyila i-clubhead engama-500cc. Okanye 600cc. Okanye 700cc. Ikhulu, ngamanye amagama. Indlela phezu kwemida. Ii-clubheads ezinkulu zidala umzuzu wokulinganisela kwe-inertia ngendlela ephakamileyo kunokuba avunyelwe yimithetho.
9 Enkulu 'i-90's Rocks Covers You Have to Hear
Ama-Otodus Facts and Figures
Yintoni Eyona Mveliso Eyona Mthethweni?